Budata Trash Truck Simulator APK maka Android
Budata Trash Truck Simulator
Free Budata maka Android (96.00 MB)
Budata Trash Truck Simulator,
Trash Truck Simulator bụ ịme anwansị ụgbọ ala nke ị nwere ike iji na sistemụ arụmọrụ gam akporo rụọ na ekwentị mkpanaaka gị. Ị na -egosi nkà ịnya ụgbọ ala gị negwuregwu ebe ị na -agbalị ịga nihu netiti obodo na nokporo ụzọ dị warara.
Trash Truck Simulator, ịme anwansị na -anya ụgbọ ala nwere eserese dị elu, bụ egwuregwu ebe ị na -anwa igosi nka gị. Negwuregwu ahụ, ị ​​na -ejikwa ụgbọ ihe mkpofu wee nwaa ịrụ ọtụtụ ọrụ. Ị na -anakọta ihe mkpofu, buru ya gaa nebe mkpofu ahịhịa ma jiri nlezianya na -anya ụgbọ ala. Ị nwere ike igosi nka gị site nịgbaso iwu okporo ụzọ wee nwee ahụmịhe dị adị. Ị nwere ike họrọ ụgbọ ala dị iche iche na egwuregwu, nke nwere gwongworo zuru ezu. Egwuregwu ahụ, nke ị nwere ike igwu na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, gụnyekwara usoro okporo ụzọ dị elu. Yabụ ị nwere ike ịdị ka ị nọ na ezigbo okporo ụzọ.
Nime egwuregwu ahụ, nke nwekwara ụdị njikwa dị iche iche, ị nwere ike ijikwa ya dịka ịchọrọ. Ị nwere ike hazie ụgbọ ala gị site na ịchekwa ego nime egwuregwu ebe ị nwere ike nwalee nkà ịnya ụgbọ ala gị nezie. Agbagharala Simulator Trash Truck, egwuregwu ụmụaka nwere ike igwu egwu.
Ị nwere ike budata egwuregwu Simulator Truck Simulator nefu na ngwaọrụ gam akporo gị.
Trash Truck Simulator Ụdịdị
Nha faịlụ: 96.00 MB